ज्ञानेन्द्र जस्ताको त सातो लियौ‌, केपी ओली कहाँका को हुन् र ? माधव नेपाल | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more ज्ञानेन्द्र जस्ताको त सातो लियौ‌, केपी ओली कहाँका को हुन् र ? माधव नेपाल
ज्ञानेन्द्र जस्ताको त सातो लियौ‌, केपी ओली कहाँका को हुन् र ? माधव नेपाल
फागुन २ गते, २०७७ - १७:०३
तेह्रथुम । प्रचण्ड–माधव पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तर्साएर आफुहरु नतर्सिने बताएका छन् । आइतबार तेह्रथुमको सदरमुकाम म्याङलुङ बजारमा आयोजित बोल्दै नेपालले यस्तो बताएका हुन् ।
अध्यक्ष नेपालले तर्साउन रामकुमारी झाँक्रीपछि आफु र प्रचण्डलाई गिरफ्तार गर्ने योजना भएपनि झाक्री गिरफ्तार गर्दा उर्लिएको जनसागरले ओली आफै डराएर पछि हटेको बताए ।
‘रामकुमारीलाई पहिले समात्ने अनि माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई गिरफ्तार गर्ने योजना रहेछ । कस्ता फूर्ति कस्ता घुर्की । तिनले तर्साएर हामी तर्सने मान्छे हौ ?’ अध्यक्ष नेपालको प्रश्न छ । उनले ज्ञानेन्द्र जस्ताको त आफुुहरुले सातो लिएको भन्दै केपी ओली कहाँका हुन् ? भनेर प्रश्न गरे ।
‘जससँग बहुमत हामीसँग छ । यो पार्टी हाम्रो पार्टी हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) । केपी ओलीको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुन सक्दैन’ अध्यक्ष नेपालको भनाई छ । उनले केपी ओलीलाई रहर नै भए ओली फाउन्डेसन बनाउन सुझाव पनि दिए ।
फागुन २ गते, २०७७ - १७:०३ मा प्रकाशित